Mareykanka Oo Balidoogle Ka Dhistay Saldhigga Sedaxaad Ee Uu Ku Leeyahay Qaaradda Afrika [WARBIXIN].
Saturday May 05, 2018 - 14:19:43 in Wararka by Super Admin
Dowladda Mareykanka ayaa ballaarinaysa howlgalka melleteri ee ka dhanka muslimiinta ee ka socda qaaradda Afrika gaar ahaan Soomaaliya.
Warbixin sir ah oo ay faafiysay shabakadda Vice News ayaa daaha ka feydaysa mashruuca gurrucan ee dowladda Mareykanka ka waddo Soomaaliya kaas oo ay kula dagaallamayo dadka muslimiinta iyadoo ku marmar siyoonaysa "ka Hortagga Argagaxisada".
Saxafiyadda warbixinta qortay ayaa sheegtay in dowladda Mareykanka ay ballaarisay dhismaha garoonka melleteriga Balidoogle oo loo rogay saldhig weyn, dhismayaasha ku dhax yaal saldhigga waxaa lagu diyaariyay inka badan 800 oo sariirood waxaana latilayaa in sariirahaas ay jiifsadaan askar iyo saraakiil American ah.
Melleteriga Mareykanka ayaa si qarsoodi ah Balidoogle uga dhigay saldhigga sedaxaad ee ugu weyn saldhigyada melleteri ee qaaradda Afrika marka laga reebo saldhigyadiisa kuyaal Jabuuti iyo Niger.
Qandaraaslayaal Melleteri oo American ah ayaa Vice News u xaqiijiyay in dhismaha saldhigga Balidoogle uu ahaa mid qarsoodi ah soona billaawday Bishii January 2017, mareykanku waxay adeegsanayaan diyaarado uu farsameeyay midowgii soofiyeeti kuwaas oo qalabka dhismaha kasoo daabulaya dhanka Jabuuti.
Saraakiisha AFRICOM ee ku sugan wadanka Jabuuti ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan ballaarinta saldhigga Balidoogle balse Qandaraaslayaasha Melleteri ee ka qeyb qaatay dhismaha saldhiggan qarsoodida ah ayaa xaqiijiyay in uu jiro dhaq dhaqaaq xooggan oo Mareykanku ku doonayo in uu ku xoojiyo howlgallada uu ka wado Soomaaliya.
Dowladda Mareykanlku waxay sheegaysaa in ciidamadeedu dagaalka ay kula jiraan Al Shabaab oo beyco kala jirto Al Qaacidda ayna muhiim tahay in ay ka caabiyaan ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa dowladda Federaalka ah weerarada xooggan ee uga imaanaya shabaabul Mujaahidiin.
Taliska Mareykanka qaaradda Afrika oo loo yaqaan (AFRICOM) ayaa tirada ciidamada ka jooga dalka soomaaliya wuxuu ku sheegay in ka badan 500 askari kuwaas oo tababar iyo dagaal gelin siiya ciidamada AMISOM iyo Maleeshiyaadka DF-ka sida uu sheegay afhayeen u hadlay taliska Afrika.
Sanaddii 2016 AFRICOM waxay sheegaysay in 50 sarkaal oo kaliya ay ka joogeen Soomaaliya balse si lama filaan ah ayey Mareykanku u xoojiyeen ciidamadooda ka dagaallamaya gudaha dalkan istiraatiijiga ah ee dhaca geeska qaaradda Afrika.
Tan iyo Janaayo 2017, melleteriga Mareykanka ayaa Soomaaliya ka fuliyay ugu yaraan 48 duqeyn marka la barbardhigo 14 duqeym oo uu fuliyay sanaddii 2016 halka sanaddii 2015 uu fuliyay 11 duqeyn , sida laga soo xigtay Bureau of Investigative Journalism oo ah hay'ad fadhigeedu yahay magaalada London.
Helitaanka warbixinno dhammeystiran oo ku saabsan dhismaha saldhigga Meleteri ee Balidooglleayaa ayaa aad u xaddidan laakiin qandaraaslayaal Maraykan ah iyo saraakiisha ammaanka ee dowladda Federaalka Soomaaliya oo aqoon u leh mashruucan ayaa u sheegay VICE News in dhismahu billaawday sanaddii lasoo dhaafay.
Tan iyo markii uu talada wadanka Mareykanka la wareegay Donald Trump ayuu qaaday weeraro lagu xasuuqay boqolaal qof Soomaali ah, Trump ayaa wasaaradda G/dhigga fasax usiisay in Soomaaliya ay ka geysan karto weeraro aan kala sooc laheyn.
Duqeymo ka dhaca Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa lagu dilay dad shacab ah oo aan waxba galabsan, weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee Mareykanku uu ka fuliyay Soomaaliya ayaa ka dhacay gobollada Jubbooyinka iyo Sh/hoose.
HOOS KA DAAWO SAWIRRADA QAAR KAMID AH DADKII MAREYKANKU XASUUQAY
Taliban Oo Sheegtay in Wadahadallada ay kula Jirto Mareykanka ay heer gaba gaba ah marayaan.
Khubaro iyo Mas'uuliyiin Katirsan Q.Midoobay Oo Kamid ahaa Dadkii Ku Halaagsamay Shilkii Diyaaradeed Ee Itoobiya ka dhacay [Warbixin].